I-Hydraulic hinge i-hinge ye-hinge yesiseko se-3D ye-V-SME SME SMEBISO xa ithelekiswa neemveliso ezifanayo kwintengiso, ineengenelo ezingenakuthelekiswa nanto ngokwendlela yokusebenza, inkangeleko ebonakalayo kwimarike.Addith ishwankathela iziphene ze iimveliso zangaphambili, kwaye uqhubeke ngokuqhubekayo. Inkcazo ye-Hydraulic hinge i-Hinge Clip-kwi-3D engaphantsi ye-V-Dament ye-V-Damement ye-V-DameS inokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zakho.
I-Hardid Council Homedware Hydraulic indlela ezimbini ze-Hinge Ship-Vula uhlengahlengiso lwe-3D ukusuka kwi-Operth Horedwation kunye nexabiso elinexabiso lenkqubo ye-Hinge kunye neNkonzo yeSisombululo seZicwangciso-nkqubela.
I-Hydraulic hinge ye-hinge i-hinge nge-3D yohlengahlengiso (indlela ezimbini)
Iplate yokusebenza esisigxina
Ngenkxaso yeqela leenkonzo zobungcali, ukongeza kunengcebiso ephezulu kubathengi.
3.Excellent emva kwenkonzo yokuthengisa: Sinika ikhululekile kwaye ithobela emva kwenkonzo yokuba zonke iimpahla zithengiswe, ukuba kukho ukuzicombulula ingxaki ekuqaleni kwakho emva kokuba unike ubungqina bolwazi bangaphambili.
Uhlobo: I-Hydraulic hinge ye-hinge i-hinge nge-3D yohlengahlengiso (indlela ezimbini)
Umsebenzi: Iplate yokusebenza esisigxina
Ukuvula i-engile: I-105 °
Ubunzulu beNdebe yeHinge: 11.3mm
Ubunzima bokungacacanga: I-14-22mm
Inqaku eliphambili: Intsimbi eqengqelekayo ebandayo
Gqibezela: I-nickel icacisiwe
Isiseko esikhoyo: Isiseko se-Hole, isiseko se-4 hole, isiseko seV
Izinto ezinokukhethwa: Ikhava yekomityi, isiciko sengalo
Ubungakanani: I-SGA1600A - Ikhava epheleleyo, i-SGA1600B - isiqingatha sekhava, i-SGA1600C-Faka
Isiqinisekiso: ISO 9001/2000
Iphakheji: Ngesiqhelo isibini kwi-polybag ngesikere, izibini ezili-100 kwibhokisi yebhokisi, okanye ipakethi yemfuneko yakho.extra Ixabiso liya kucelwa ukuba ibhokisi ekhethekileyo efana nebhokisi yemibala, kwaye njl.
Umhla wokuzisa: Malunga neentsuku ezingama-25 ukuya kwengama-6 ngokusekwe kwinani lakho le-oda
Ubuchule boBone: I-1,0000 000 i-PC / inyanga
Ithuba lentlawulo: T / t, l / c okanye abanye ngothetha-thethwano.
Iisampulu zinikezela: Siza kunika isampulu yasimahla yokutshekishwa komgangatho.
Ulungiselelo lweesampulu: Iisampulu ziyakulungela ukuthumela malunga neentsuku ezintathu zomsebenzi ngokubonisa ukuba i-DHL, i-UPS, TRT, FedEx okanye i-EMS.
4. Olu hlobo lwe-hinge lunemigangatho emibini ye-buffir yenqanaba, iphaneli yocango inokumiswa kuluhlu lwe-110 ° ukuya kuma-45 ° Apho kuya kuvalwa i-45 °, kunokuba lula ivaliwe emva kokuyeka.
5. Uyilo oluphezulu oluguqukayo lwe-Hinge, iphaneli yocango inokuhlengahlengisa umgama phezulu nangaphantsi, ngasekhohlo nangasekunene, kwaye ilungele ukuba uhlengahlengise ngokwesiqhelo sesicelo.
6. Uyilo olusisiseko lwe-V-olwenziweyo lubekwe kakhulu kwintengiso kwaye kube lula ukuphumelela abathengi abaphelileyo.
7. Izinto ezinokukhetheka, zinokuxhotyiswa ngekhava yengalo ehambelanayo, ikhava yendebe okanye ezinye izinto ngokweemfuno zakho.